в Ama-Analytics, Ukuphinda usebenzise kabusha, Ubunjiniyela / Ubuchwepheshe, Ezomnotho nokuhlaziya
Kunengqondo kangakanani ukuthola (ukuthola, hhayi ukuthola ngokuthengiswa kwemikhiqizo) ama-euro angama-2000 2000 ngehektha elilodwa? Kunengqondo yini ukuthola i-XNUMX Euro / ha kwezilimo zasensimini? “Ngempela,” kusho umphathi we-Vimal wenkampani uSergey Samonenko.
Izinhlobo zesitashi - insindiso yamazambane ekhula
UVimal usanda kwethula ifektri enkulu yesitashi eMpumalanga Yurophu eChernihiv. Imishini efakwe kuyo ingasebenza amathani angama-1440 amazambane ngosuku. Isigaba sokuqala, esikwazi ukucubungula amathani angama-700 / ngosuku, sivele sisebenza. Isitashi esikhiqizwayo lapha sihlangabezana nazo zonke izindinganiso zekhwalithi yomhlaba futhi sesivele sithunyelwa eTurkey, China ngisho neNetherlands - isikhungo somhlaba wonke sokwenza umkhiqizo wesitashi. “Ngaphezu kwalokho, lokhu akusikho ukuthengisa kabusha. Ngoba abathengisi abangamaDashi abadayisa emhlabeni wonke abaphathi isitashi kithi, kodwa beze nezikhwama zabo ezinophawu, bapakishe isitashi sazo kubo efektri bese bezithumela ngqo eChina, ”kusho uSergey Samonenko. Ngemuva kokukhiqiza umkhiqizo onamandla kanjena, iVimal manje seyakha umjikelezo wabahlinzeki. Ngaso leso sikhathi, lesi sitshalo asidingi amanye amazambane, kodwa ngokuqukethwe okuphezulu kwesitashi. Isibonelo, ngokuqina kwe-20%, isitshalo sikulungele ukukhokha ama-0,09 euros / kg. “Sikhokha ngaphezulu kwamaphesenti angama-30 amazambane kunalawo akhokha ku-European Union,” kuphawula uS. Samonenko. Ukuqina okuphezulu kungatholakala kuphela ngezinhlobo ezikhethekile zesitashi. Hhayi-ke, ngaphandle kwe-chips - uma imikhiqizo ngesizathu esithile ingasenelisi umakhi we-chip noma uma, njengoba ngonyaka owedlule, isimo sezulu sinjalo ukuthi esikhundleni se-16% esichaziwe kunhlobonhlobo ehlukahlukene, ukuqina kwakungu-20% wonke, futhi kunikezwe leli potato ngesinye isikhathi kwaba yinzuzo enkulu efektri yesitashi kunokuba ifektri ye-chip.
Umqondisi wenkampani "Vimal" Sergey Samonenko
Ukutshalwa kwezinhlobo zesitashi ezikhethekile, njengoba uS. Samonenko asho, kwethulwa kuphela e-Ukraine. Manje lezi zinhlobonhlobo azisebenzi ngaphezu kwe-10% yevolumu yezinto zokwenziwa ezilethwa kuVimal. Ezinye ezinye zingaphansi kwemikhiqizo yama-crisps (ukuqina kwesitashi se-14%) noma itafula (ukuqina kwesitashi esingu-16-10%). Impela, ngesitashi esinjalo, intengo yokwamukelwa ayikuvumeli ukuthi uthembele kunoma yiluphi uhlobo lwemali: vele uthole okuthile kwamazambane angaphansi uma ungenayo imfuyo yakho yezingulube ukuze uzondle amazambane.
Namuhla, iVimal yamukela amazambane ngentengo elandelayo: ukuthola isitashi i-10-13% - 0,03-0,04 i-euro / kg; 13-15% - 0,05-0,06 i-euro / kg; 15-18% - 0,06-0,07 i-euro / kg; ngaphezulu kwe-18% - kusuka ku-0,07 euro / kg. Kepha amapulazi amaningi amazambane aqala ukuba nentshisekelo ngezinhlobo zesitashi. Bachukunyiswa yisimo semakethe: ukukhiqizwa kakhulu kwamazambane etafula kuholele ekutheni amanani entengo aqhamuke lapho amapulazi abheka inketho yokunciphisa amazambane akhula, athengise imishini ekhethekile futhi egxile kummbila nakulanga. Ngakho-ke, kulesi simo, ukutshalwa kwezinhlobo zesitashi kungaba yinsindiso yamapulazi amazambane enkathi lapho isizukulwane sisaphila esaziyo ukuthi singazilima kanjani amazambane zodwa.
USergey Samonenko unikeza ukubala okujwayelekile kwezomnotho. Isibonelo, uma uqoqa ama-50 t / ha wezinhlobonhlobo zamazambane, ungawathengisa ngama-4 euros. Akukho kudoti lapha, ngokungafani namazambane etafula: noma ngubani uzokwenzela ukucubungulwa. “Ukube nje ipulazi belishiyile izwe enkundleni, kodwa lingayilethi kulesitshalo,” kunezela uS. Samonenko. Leli zinga lesivuno selinokufinyeleleka impela. Isibonelo, phakathi kwabalingani besitshalo seVimal kukhona ipulazi elivela esifundeni saseChernihiv, lapho ngonyaka ka-650 lafika ezingeni lama-2018 t / ha. Kepha izindleko zamazambane akhulayo, ngokusho kuka-S. Samonenko, manje e-Ukraine azidluli ama-euro ayi-63 / ha. Futhi yilokhu nobuchwepheshe obuphezulu obudinga ukutshalwa kwamazambane angathengiswayo. Kepha, njengoba umqondisi wenkampani yaseVimal ekhumbuza, amazambane athosiwe awadingi ukugcinwa, alinganiswe, noma ahlanganiswe. Asikho isidingo sokunakekela isethulo kwinqubo ekhulayo, futhi lokhu kunciphisa kancane izindleko ze-fungicides nama-insecticides. Isibonelo, ukulawulwa kwezinambuzane bekukhawulelwe ekuthatheni ama-tubers ngokumelene neBhungane lembiza yamazambane, futhi lokho kwanele. Ukubala kweVimal kukhombisa ukuthi ngokukhula izinhlobo zesitashi esikhundleni sama-canteens, ungagcina ihektha ngalinye: ukuhlunga - ama-euro ayi-2790 (ama-euro ayi-124 / t); izindlela ezimbili zokwelapha i-fungicidal - ama-euro angama-2,79;
kwigridi yemifino - ama-euro angama-86;
ngokunciphisa inani lomanyolo elisetshenzisiwe - cishe ama-euro angama-48;
ukufaka esikhundleni sezidakamizwa zoqobo ngama-generics asezingeni elihle - ama-euro angama-54 Ngokuvamile, imali elondoloziwe icishe ibe yi-412 euros / ha, okunciphisa izindleko ngehektha ngalinye kuya kuma-2378 euros. Ngakho-ke, kwihektare ungathola ama-euro angama-2000 15. Kuliqiniso ukuthi kunamapulazi lapho kuvunwa khona ama-1744 t / ha, lapho kusetshenziswa izinto zokutshala, akwaziwa ukuthi iziphi izinhlobo zokuzala ezikhiqizwa ngesandla, hhayi emapulazini enzalo ngaphansi kokulawulwa kwamafemu okuzala; lapho imishini isiphelelwe isikhathi futhi ingasiki imigodi, bese umgaya eshiya ingxenye yesilimo emhlabathini. Kepha noma ngabe kunjalo, ngokusho kukaS. Samonenko, umlimi wamazambane angathola. Ngakho-ke, ipulazi elilodwa ayaziwa ngalo lalilondolozwe kubuchwepheshe futhi libiza ama-euro ayi-30 / ha kuphela, ngenxa yokuthi lafinyelela isivuno sama-19,5 t / ha kuphela. Ngasikhathi sinye, isitashi sasingu-951%, okuvumela ukuthi ipulazi lithole ama-XNUMX euros ngehektha ngalinye.
Isipiliyoni seVimal-Agro: imfihlo inama-fungicides
Inkampani yaseVimal akuyona nje iprosesa edonsela amathemba amnandi phambi kwabahlinzeki. Le yinkampani ehlukahlukene, ebandakanyeka ekusebenzeni kwamazambane, nokwakha, nezolimo. Ikakhulu, inkampani yezolimo iVimal ifaka inkampani yezolimo iVimal-Agro, etholakala edolobhaneni laseVimal. Kukhethwe uKulikovsky esifundeni saseChernihiv esifundeni. Phakathi kokunye, inkampani yezolimo ngonyaka we-2018 ikhule izinhlobo zesitashi samazambane - uSusanna no-Eurostarch (bobabili - ukuzalanisa i-Europlant) kanye nokukhethwa kukaKuras. Ngokusho kukaYuriy Dyak, umqondisi weRekh Agro, umsabalalisi okhethekile wezinhlobo zokukhetha i-Europlant e-Ukraine, i-Eurostarch iyinhlobo esezingeni eliphakathi nendawo (isikhathi esikhulayo sezinsuku ezingama-85-95), emelana nokulimala kakhulu sekwedlule isikhathi, igciwane elihlikihla amaqabunga, umlenze omnyama, ama-nematode, liyadingeka ekudleni okulinganiselayo, okunesitashi okungenzeka kube ngu-20-21% kanye nesivuno esifinyelela ku-50 t / ha. Kepha ukuhlukahluka kweSusanna kuyinto ephakathi ekuqaleni, okunesivuno esifanayo futhi kukhulu (22,5%) ukuqina, ukumelana ne-metribuzin nezifo eziningi. Amahektha ayi-100 ayethathwa amazambane abilayo enkampanini yezolimo. Isivuno samazambane ekuqaleni kokumba kwakungu-35 t / ha, ekugcineni - 40 t / ha. Njengoba uS. Samonenko eqinisekisa, lesi akusona isamba esikhulu isivuno esingasinikeza: amazambane abiwa kusukela ngo-Agasti kuya maphakathi no-Septhemba, kuyilapho isivuno esikhulu sezinhlobonhlobo sinikezwa lapho sekumba ngasekupheleni kukaSepthemba noma eminyakeni eyishumi yokuqala ka-Okthoba. Ngakho-ke, inkampani yezolimo "iVimal-Agro" ikhombisile isibonelo sokutshala ngempumelelo izinhlobo zezitashi zamazambane. “Besifuna ukwethula iphrojekthi yokukhulisa amazambane athosiwe ngonyaka ka-1 - ukutshala amahektha angama-2014- 5 bese sibona imiphumela, sibala ukusebenza kwezomnotho ngempumelelo. Kodwa-ke impi yavinjwa. Kepha ngonyaka ka-10, kwaba nokuvuselelwa kwesithakazelo kule phrojekthi: umugqa ongaphambili uzinzile, ngenkathi isimo emakethe yamazambane sokudla siba sibi kakhulu, okuphoqe abakhiqizi ukuthi bafune izindlela ezintsha. Ngaphezu kwalokho, ithemba lokukhula kwezinhlobo zesitashi, ngokwezibalo zeVimal, libukeka likhuthaza:
Ukudla Isitashi (isitashi 20%) I-Chipsy
Ukukhiqiza, t / ha 45 45 38
Ukuthengiseka,% 85 100 80
Intengo yokuthengisa yamazambane athengiswayo, i-euro. / Kg 0,1 0,095 0,12
Intengo yokuthengisa yamazambane engeyona eyezentengiso, i-Euro. / Kg 0,06 0,06
Imali engenayo, inkulungwane ye-Euro / ha: isiyonke 4,26 4.28 4.11
kusuka ekuthengisweni kwemikhiqizo engathengiswa 3,88 3,67
kusuka ekuthengisweni kwemikhiqizo okungeyona eyampahla kuya kwesitashi 0,38 0,44
Izindleko, inkulungwane ye-Euro / ha 3,22 2,34 2,98
Inzuzo, izinkulungwane ze-Euro / ha 1,51 1,92 1,13
Ephawula ezibalweni, uS. Samonenko waphawula ukuthi inkomba yokumaketha okungama-80-85%, ikakhulukazi amazambane etafula, inethemba elikhulu, ngoba ngokwenza leli zinga kuvame ukuba ngama-75, ngisho no-50%. Efingqa isizini yokuqala yokukhula kwezinhlobo zamazambane anesitashi ngamanani amakhulu, uS. Samonenko uthole izimfihlo ezimbili eziyinhloko. Esokuqala wasakha ngokulandelayo: "70% wesibambiso sesitshalo - imbewu efanele." Ngembewu efanele, wayesho ukuthi ukutshala impahla yokuphindwa kabusha okuphezulu, okuhlangabezana nezidingo zamazinga wegciwane, njll. Isibonelo, uma usebenzisa izinto zokutshala hhayi ze-1, kodwa zokuzala kwesibili, unganciphisa izindleko zayo kusuka kuma-2 kuya kwangama-383 euros / kg Kodwa-ke, ngenxa yalokhu, i-255% yesitshalo ayemukelwa, ebiza ipulazi i-15 euros / ha. Ngakho-ke, "ukonga" ekutshaleni impahla kuphumela ekulahlekelweni okuphelele kwama-636.942 eur / ha. Isici sesibili sezinhlobonhlobo zesitashi ukuthi bakha inqwaba yesivuno emasontweni ama-8100 noma ngisho nama-3 wezimila, okungukuthi ngoSepthemba. “NgoJulayi, lapho kuchithwa izinsuku eziningi zamasende amazambane, izinhlobo zesitashi zibukeka zingasebenzi: nezilimo eziyizigaxa zisencane. Kepha emasontweni amabili edlule kube nokukhula okukhulu kokukhiqiza, ”kusho uS. Samonenko.
Umqondisi weRekhodi Agro Yuri Dyak (osesithombeni ngenhla).
Ngakho-ke, izinhlobo zesitashi ngaphezu kwanoma yini enye zidinga ukulondolozwa kwenqwaba eluhlaza ngenkathi yokukhula. "Ukulondolozela inqwaba yemifino ehlobo lonke, kuze kube uSepthemba, kuyimfihlo yesibili yokukhula kwezinhlobo ezithambile," kusho uS. Samonenko. Futhi, wathi, bekungeke kwenzeke ngaphandle kokusebenzisa isikhunta eziseqophelweni eliphezulu, esisindise isisindo semifino ezifweni, ngokuyinhloko kusuka ku-alternariosis kanye nokulimala sekwephuzile. Inkampani yeVimal-Agro icubungule amazambane wayo athambile kanye ne-Propuls kusuka ku-alternariosis futhi kathathu noDitan kusuka ekulimaleni sekwephuzile. Lokhu kwenza ukuthi kube namandla okugcina ubuningi bezitshalo zamazambane ngesikhathi sasehlobo kuze kube ngoSepthemba kuhlanganiswa. Ngaphandle kwalokhu, inkampani yezolimo ibingakutholi ukukhiqizwa kwezinhlobo zesitashi okuzoyivumela ukuthi izuze.
Imfihlo yesithathu yokukhula kwezinhlobo zesitashi, wabiza umanyolo wamazambane potassium sulfate esikhundleni se-chloride yendabuko. "Ukusetshenziswa kwe-potassium sulfate esikhundleni se-chloride kukhulisa ukungagodli," kuchaza uS. Samonenko. Abafuyi be-Europlant baqaphela ukuthi i-potassium chloride ivunyelwe ukwethulwa, kepha ngemithamo elinganiselwe: entwasahlobo - akukho ngaphezu kwe-80 kg / ha. Kepha izinga lokwethulwa kwe-K2I-О inconyelwe ezingeni le-190-250 kg / ha. Futhi, akufanele wengeze nitrogen eningi, ngoba lokhu kunciphisa ukuqina. Njengoba u-Yuri Dyak asho, isilinganiso sokufakwa kwesicelo se-nitrogen akufanele sedlule i-100 kg / ha, kanti ukwethulwa kwalesi sakhi kufanele kumiswe ngaphambi kwesigaba sokuqhakaza. Umthamo ofanele we phosphorus, ngokusho kwakhe, ngu-120 kg / ha. Futhi, izinhlobo zesitashi zidinga ukwethulwa kwe-magnesium ngesilinganiso sama-80 kg / ha kumithamo emibili ehlukanisiwe.
Ngakho-ke, izindleko zokukhula ngehektha elilodwa lezinhlobonhlobo zamazambane yilezi: zokutshala kokuzala kokuqala kwenkundla yokutshala yamayunithi ayizinkulungwane ezingama-1 / ha wezinhlobonhlobo sekwephuzile namayunithi ayizinkulungwane ezingama-1 / ha wezinhlobonhlobo zangaphambili - 42 euro / ha; kumanyolo - 44 euro / ha; ukuvikela izitshalo - ama-1146.49 euro / ha; kaphethiloli - ama-500 euro / ha; ezinye izindleko (iholo, irenti, ukwehla, njll.) - ama-350 eur / ha. Ngokuvamile, ngokusho kuka-S. Samonenko, ubuchwepheshe bezolimo bezinhlobonhlobo zamazambane buhlala busikhumbuza ubuchwepheshe bezolimo bamazambane etafuleni. Lokhu kuvumela abakhiqizi bamazambane etafuleni ukuthi bashintshe kalula ezinhlotsheni ezinesitashi futhi, kuncike ekungenisweni kobuchwepheshe obuphezulu bezolimo, bathola i-200 Euro / ha - okuningi njengoba kungekho okunye okunikezwayo kwezitshalo zasensimini.
Tags: isitashi samazambaneisitashi